आज माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने विशेष दिन ! कारण र विधि जान्नुहोस् ! - Mitho Khabar
June 23, 2022 mithokhabarLeaveaComment on आज माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने विशेष दिन ! कारण र विधि जान्नुहोस् !
उज्यालो नेपाल चितवन ,
हिन्दू धर्ममा, हप्ताको प्रत्येक दिन कुनै न कुनै देवतालाई समर्पित गरिन्छ। शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने, यो दिन धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने गरिन्छ । आजको दिन व्रत बसी लक्ष्मीको विशेष पूजा गर्नाले खुसी हुन्छिन् । शुक्रबारको दिनमा गरिने केही उपाय पनि लक्ष्मीलाई प्रसन्न बनाउन निकै प्रभावकारी हुन्छन् । माता लक्ष्मीको कृपा भए जीवनमा अपार सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । मानिस धनी बन्छ, उसको जीवनमा कुनै कुराको कमी हुँदैन । आज शुक्रबार होलीको दिन पनि हो । विचार
शुक्रबारको दिन गर्नुहोस यो उपाय
धन प्राप्तिको उपायः शुक्रबार रातो कपडामा डेढ किलो चामल राख्नुहोस् । ध्यान राख्नुहोस् कि चामल भाँच्नु हुँदैन अर्थात भाँच्नु हुँदैन। चामलको यो पोथी हातमा लिएर ‘ओम् श्रीं श्रीये नमः’ मन्त्रको जप गर्नुहोस्। कम्तिमा5मोती बनाउनुहोस्। यसो गर्नाले देवी लक्ष्मी प्रसन्‍न भई धेरै धन प्राप्त हुन्छ ।
अखंड हनिमूनको आशीर्वादः श्रीमान्को दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि शुक्रबार माँ लक्ष्मीको मन्दिरमा गएर रातो रङको वस्त्र चढाउनुहोस्। मीठा–मीठा चिज पनि चढाउने । यसो गर्नाले माता लक्ष्मीले वैवाहिक जीवनमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
भगवान विष्णुको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने उपायः भगवान विष्णु लक्ष्मीका पति हुन्। शुक्रबारको दिन श्री लक्ष्मी नारायणको जप गरी खीर चढाएमा माता लक्ष्मीको साथमा भगवान विष्णु पनि प्रसन्‍न भई धेरै प्रगति, धन प्राप्त हुन्छ ।
घरमा सदैव माता लक्ष्मीको वास होस् : यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने माता लक्ष्मीले सधैं तपाईको घरमा बास गरोस्, त्यसका लागि शुक्रबार हातमा ५ वटा रातो फूल लिएर माता लक्ष्मीको ध्यान गर्नुहोस् र ती फूलहरूलाई खल्ती वा पैसाको ठाउँमा राख्नुहोस्। यसलाई जारी राख्नुहोस्
Disclaimer:यहाँ दिइएको जानकारी सामान्य धारणा र जानकारी मा आधारित छ।
‘मोबाइलमा नै सीसीटीभी जोडेका अर्जुन कार्कीले पत्नीको हत्या भएको किन देखेनन् ?’